ခါးသီးသောအက္ခရာများကိုပုံနှိပ်ထားသောချောမွေ့သောအမျိုးသမီးများအားကစားအင်္ကျီများ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိခြင်း WoopShop®
မြင့်မားသောခါးလောက်ပေးစာ Printed ချောမွေ့စွာအမျိုးသမီးများအားကစား Leggings Up ကို Push
အရောင် Black1 blackxnumx Red1 အလင်း Purple1 နှင်းဆီ Red1 Khaki Grey1 Black3 မီးခိုးရောင်အလင်း White3 နှင်းဆီ Red3 bluexnumx Black4 White4 Grey4 Orange4
S / Black1 M / Black1 L / Black1 XL / Black1 S / black2 M / black2 L / black2 XL / black2 S / Red1 M / Red1 L / Red1 XL / Red1 S / အလင်း Purple1 M / Light Purple1 L / Light Purple1 XL / အလင်း Purple1 S / နှင်းဆီ Red1 M / နှင်းဆီ Red1 L / နှင်းဆီ Red1 XL / နှင်းဆီ Red1 S / Khaki Grey1 M / Khaki Grey1 L / Khaki Grey1 XL / Khaki Grey1 S / Black3 M / Black3 L / Black3 XL / Black3 S / Light grey3 M / Light grey3 L / Light grey3 XL / အလင်း grey3 S / White3 M / White3 L / White3 XL / White3 S / နှင်းဆီ Red3 M / နှင်းဆီ Red3 L / နှင်းဆီ Red3 XL / နှင်းဆီ Red3 S / Blue3 M / Blue3 L / Blue3 XL / Blue3 S / Black4 M / Black4 L / Black4 XL / Black4 S / White4 M / White4 L / White4 XL / White4 S / Grey4 M / Grey4 L / Grey4 XL / Grey4 S / Orange4 M / Orange4 L / Orange4 XL / Orange4
ခါး၌အက္ခရာမြင့်သောအက္ခရာများပါသောအမျိုးသမီးအားကစားအင်္ကျီများ - S / Black1 backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
feature ကို: ယောဂဘောင်းဘီ၊ လေ့ကျင့်ရေးအင်္ကျီအပြေး, အမျိုးသမီးများအတွက်ဘောင်းဘီ၊ မြင့်မားသော elasticity, ချောမွေ့သော tummy ထိန်းချုပ်မှု, ယောဂအမျိုးသမီးဘောင်းဘီ, ကြံ့ခိုင်ရေးအားကစား Leggings
tag ကို Size ကို ခါးcm တင်ပါးရိုးcm အမေရိကန် Size ကို အီးယူအရွယ်အစား ဘောင်းဘီရှည်cm
မှတ်ချက် - 1-3cm အမှားအယွင်းများသည်လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ စင်တီမီတာနှင့်တိုင်းတာမှုတိုင်းတာချက်များ 1cm = 0.39inch တွင်မှတ်သားပါ။
La calidad de la Lycra excelente! Son bellísimas! La tela estira! 100% ထောက်ခံချက်
ငါ့ကို encantan! Y tiene bastante talla ။ muy contenta y ငါ့ကိုllegó muy rapido
ietwietne legginsy, super leżą။ Bardzo szybka przesylka -11dni ။ Bardzo polecam ။
LT မှအတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းပေးပို့။ ကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်ချက်ချန်ထားပါ။ ယေဘုယျအား, ဒီခြေထောက်ကောင်းတစ် ဦး အရည်အသွေးရှာနေသူမဟုတ်ပါဘူး။ ခါးမှာကျယ်တဲ့တီးဝိုင်းကိုငါလွဲချော်သွားတယ်၊ ပါးလွှာတယ်။ စာသည်ပုံများကဲ့သို့တိကျ။ ကောင်းစွာဖတ်လို့လည်းမရပါ။ မကောင်းတဲ့ပုံနှိပ် layout ကို။ ဖတ်လို့ရအောင်အက္ခရာတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ပိုမိုတိကျမှုလိုအပ်သည်။